VOB Editor: Sida loo Edit VOB Video Files in Windows iyo Mac
> Resource > Video > Sida loo Edit VOB Video Files in Windows iyo Mac
Files VOB waa files xogta filim ka DVD saxanno, waxaa ka mid ah video, audio, iyo subtitles. Waxa ay caadi ahaan lagu kaydiyaa folder VIDEO_TS ah. Haddii aad qabto filimada VOB aad rabto in aad ku gubi galay DVD cajalladaha ama haddii aad rabto in aad u astaysto files VOB dooxay by lana siii, falinjeeerka ama dejinta saamaynta, waxaad u baahan kartaa a editor VOB .
Qaybta 1aad: Sida loo Edit VOB File
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit VOB File
Wondershare Video Editor (Windows 8 taageeray) si weyn lagu talinayaa sida VOB awood Video Editor. Waa maammula fududahay in la isticmaalo iyo ka buuxaan muuqaalada waa in aad u qanciso baahidaada video tafatirka!
VOB Xoog Video Editor:
Si fudud jar, isku shaandheyn, dalagga, ku milmaan iyo isu VOB video files;
Ku kab VOB videos aad la qoraalka, filter iyo kala guurka saamaynta cajiib ah;
Saamaynta Advanced sida Janjeeri-wareeg, Muuse, Jump jarid, Face-off, iyo in ka badan waxaa la siiyaa;
Guba VOB videos si aad u DVD, geliyaan gal Facebook iyo YouTube ama badbaadin qaabab kala duwan.
Video tafatirka ma ay leedahay in la adag inta aad isticmaasho VOB video editor. Qorshahaa waxa dareen leh ka dhigayaa dhammaan fursadaha tafatir ah u fudud in ay helaan qof walba.
Si fudud jar, isku shaandheyn, dalagga, gooyay videos on waqtiga, ama dhalaalka ganaax-habayn, la barbardhigo, ciyaaro xawaaraha, mugga audio, garoonka suuqa kala tafatir ah.
Ku kab VOB videos aad iyagoo cabsi badan kala guurka, Intro / credit, koobab iyo sida diirada. Saamaynta Advanced sida PIP, Janjeeri-wareeg, Jump gooyaa oo dheeraad ah oo sidoo kale la siiyaa.
Hababka video qaybsiga kala duwan si aad u doorato, si toos ah u geliyaan gal YouTube iyo Facebook, ka dhigo kuwo la socon kara qalabka kale, gubi ururinta DVD ah.
Sidee si fudud Edit VOB Video:
1. darsamaan, goo, Split VOB Videos
Milmaan: jiid files VOB aad rabto in aad u gal track video ah Timeline ka ah, waxay u muuqan wada toos ah ku milmaan doonaa.
2. Dalagyada, isku beddesha, Flip, Dheellitir dhalaalka, Speed, iwm
3. Ku dar horyaal, Raadka, PIP, guurka, Intro / Credit, iwm
Waa quruxsan fudud si ay u dar horyaal, Raadka, PIP, guurka, Intro / Credit, iwm la editor VOB this, waxay keeni dhammaan hawlaha waxay leeyihiin feature jiitaa-n-dhibicda. Tusaale ahaan, si ay u kala guurka daro in video ah, riix "guurka" tab iyo soo qaado hal template, jiitaa oo hoos u Timeline ah. Waxaad ku eegaan karo video cusub isla markiiba. Haddii loo baahdo, double riix shayga ku daray in ay u astaysto.
Qeybta 2: Best Video ayeey Software bilowga ah in Edit VOB File (Video Tutorial)
Sidee inay la midowdo Videos VOB
Sida loo Split VOB Video Files